May 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ယနေ့ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်နှင့် နည်းပညာများ နောက်ကိုအမီလိုက်ရင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေ၊ လူငယ် မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ဟာ မျက်မှန်လေးတွေ ကိုယ်စီ နဲ့ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိဘတွေ အနေနဲ့ရော မျက်မှန် တပ်ဆင် နေရသူများရော၊ မျက်မှန် မတပ်ရသေး သူများရော သိထားသင့်တဲ့ မျက်မှန် တပ်ရ ခြင်းနှင့် သိမှတ် ဖွယ်ရာများကို မျက်စိ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်နီလာ သိန်းနှင့် ဒီတစ်ပတ် မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပို့ပေးတဲ့ပန်းစည်းလေး ဒီနေ့ လက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့က ကျွန်မမွေးနေ့လည်းမဟုတ်သလို တခြား ထွေထွေထူးထူး အမှတ်တရနေ့မျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မနေ့ညက ကျွန်မတို့လင်မယား ပထမဆုံးအကြိမ် ရန်ဖြစ်ကြတယ်လေ။
ကျွန်မရင်ကို တစစ်စစ်နာကျဉ်စေမယ့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပေါ့။
သူပြောခဲ့သမျှအတွက် သူနောင်တရနေမှာ ကျွန်မ အသေအချာသိနေတာပေါ့ရှင်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးတွေအဖေက ကျွန်မကို ပန်းစည်းလေးပို့ပေးခဲ့တယ်လေ။
ဆေးဖက်ဝင်ကြောင်လျှာပင်အကြောင်းနှင့် အသုံးဝင်မှု မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင် ကြောင်လျှာပင်
Item Name -------- Indian Trumpet Flower (ကြောင်လျှာ)
Botany Term ------- Oroxylum indicun Vent
Species Family ----- Bignoniaceae
မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြား အမြင့်ပေ ၄၀၀၀ အထိ ပေါက်ရောက် နိုင်သည်။ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။
အရှင် တိက္ခာစာရ မန္တလေး
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက မိန့်ကြားဖူးပါတယ်။ “ပုထုဇင်တွေဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အိပ်ပျော်နေချိန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကုသိုလ် သို့မဟုတ် အကုသိုလ်စိတ် တစ်ခုခုနဲ့နေကြတာ”တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာဟာ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်စိတ်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင် ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်သလို ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်း အကုသိုလ်စိတ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကတော့ ကုသိုလ်လည်းမဖြစ် အကုသိုလ်လည်း မဖြစ်တဲ့ဘ၀င်စိတ်ပါ။ ဆိုတော့ကား.. အိပ်ရာကနိုးတဲ့အချိန်ကနေ ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်က များသလား၊ အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်က များသလား သိနိုင်ပါတယ်။
ကိုချူချာ တစ်ယောက် အခုတစ်လော အလွန်ဝလာသဖြင့် အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကြော်ငြာက သင်၏ အဆီများကျဖို့ကျွန်တော်တို့က တာဝန်ယူပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ် - - - - - ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ဟု တွေ့ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့်ရာတစ်ဖက်မှ၊ ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေဖြင့်၊ နေနရပ်လိပ်စာနှင့် တစ်ပတ်အတွင်း ပေါင်မည်မျှ ကျချင်ကြောင်း ပြောပြပါ ဟုပြန်ဖြေလေသည်။
အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် ရှယ်ပြီးသိမ်းထားပါ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင် (or) မေ့ကျန်ခဲ့ရင်
ချစ် fri ' တို့ရဲ့ ဖုန်း ပျောက် သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် ..!
တနေရာရာ မှာ မေ့ကျန် ထား ခဲ့ မိပြီး စဉ်းစား မရ
တာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ပြန် ရှာတွေ့ နိုင်စေ ဖို့ ပါ ...!
ပျောက်ပီ ဆိုမှတော့ ပြန်ရှာဖို့ ခက်ခဲ မှာပါ...!
ကောက်ရသူကလဲ ဆင်းကဒ် က အသုံးမဝင်ပေမဲ့
တန်ဘိုးရှိ ဟန်းဆက်ကို တော့ ပြန်မပေး ပဲ ဆင်းကဒ်
လဲပြီး အသုံးပြု တတ် ပါတယ်...!!
‎Kyaw Thu Ya‎ to စွယ်စုံကျမ်း
ကျောင်းသားလေးတွေပြေးနေကြ တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲလေး တစ်ခု။ ဆရာ၊
ဆရာမတွေ၊ အတန်းဖော် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ရဲ့ အားပေးမှုတွေ နဲ့
ကလေးတွေ ပြေးနေကြတယ်။ ပန်းဝင် ခါနီးပြီ။
ကိုပိုင် တစ်ယောက် စပိန် နိုင်ငံမှ နွားရိုင်းသတ်ပွဲတစ်ခုသို့
`အဲ့ဒါ နွားရိုင်းသတ်ပွဲက သေသွားတဲ့ နွားရဲ့ fighting ball ပါခင်ဗျ၊
ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအစာပါ´
... `င့ါကို တစ်ပွဲပေးကွာ´
“မြင်းအလုပ် မြင်းလုပ်၊ နွားအလုပ် နွားလုပ်” ဆိုသလိုပဲ မင်းသားမလုပ်ရတော့လို့ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်တဲ့သူတွေကလည်း သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲသည်လူတွေက ပေးကျွေးငှားရမ်း စေခိုင်းထားသူများကလည်း အွန်လိုင်းပေါ် တက်တက်ကြွကြွ ဝေါလုံးပြည့် ဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်၊ လူထုခေါင်းဆောင်အပေါ် ထောက်ခံမှု ကျဆင်းအောင် မမောမပန်း သူတို့အလုပ်သူတို့ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ စေသည့်ကျွန် ထွန်သည့်နွားဘဝတွေကိုး။ ကိုယ်တွေကတော့ အဲ့သလို စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိသူတွေ ဘယ်လိုဝေဖန် ဘယ်လိုအမနာပပြောတယ်ဆိုတာ လှည့်လည်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုချေပနေဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်မှာလည်း ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် မဟုတ်လား။ ပြောချင်တဲ့သူတွေ ပြောချင်တာ ပြောပလေ့စေ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် အရင်ကထက်တိုးတက်အောင် အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ အထူးသဖြင့် လူသစ်စိတ်သစ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အစိုးရသစ်အောက်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီး သာသာယာယာ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိစေဖို့၊ အဆက်ပြတ်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကြီးနောက်ကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေကို ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် လုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အပြုသဘော ဝေဖန်ဆွေးနွေး အကြံပေးမှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားဟောင်းတွေက အင်န်အယ်လ်ဒီလွှတ်တော်တွေမှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ဖြစ်လာကြပြီး၊ အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လူထုသမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေခေတ်က တရားစီရင်ရေးဆိုတာ အမိန့်ဖတ်ပြရတဲ့ တရားသူကြီးတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အမိန့်တွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအရာတွေကို စီမံခန့်ခွဲကြရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘ၀ကို မရောက်ချင်ဘဲ ရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
(1) ငြင်းဆိုဝါကျတွေပြုလုပ်ဖို့ not ကို သုံးကြပါတယ်
We use “not” to make negative sentences.
(1.1) We are NOT friends.
ကျနော်တို့က သူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး
(1.2) I do NOT know the answer.
ကျနော်က အဖြေက်ို မသိပါဘူး
မန္တလေးမှာ လဘက်ရည်မှာမယ်ဆို အရသာမျိုးကွဲပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။
Angela: ဒေးဗစ်၊ အခုတလော ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ
David: ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မိသားစုနဲ့ ခရီးသွားဖြစ်တယ်။
Angela: တကယ်လား ဘယ်ကိုသွားတာလဲ
David: ဥရောပ ကိုသွားခဲ့တာပါ။
ဓနုဖြူမြို့၌ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက်သဖြင့် သေဆုံး
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က အဖေကြီးပြောလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် ပုံပြင်မဟုတ်။ အဖေကြီးက ကျောင်းဆရာဖြစ်၍ သူ့ကျောင်းသား
ထိုကုလားလေးရဲ့အဖေက ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုပိုင်တဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သို့သော် ကလေးနှစ်ယောက် ကျောင်းသွားရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ပဲစီသာပေးသည်။ သို့သော် မုန့်ဝယ်စားရသည်မဟုတ်။ နေ့လယ်မုန့်စားဆင်းချိန်မှာစားဖို့ ပလာတာနဲ့ပဲဟင်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
စားသောက်ဆိုင်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောများ (၁) English conversations for restaurant staff (1)
(1) “I like to makeareservation for two people at 1 p.m.”
နေ့လည်(၁)နာရီမှာ (စားဖို့) လူနှစ်ယောက်စာအတွက် နေရာသီးသန့်ချန်ထားဖို့ မှာကြားချင်ပါတယ်
(reservation (n) သီးသန့်ချန်ထားသောနေရာ)
ကလေးတွေ ကို ဘာတွေးရမယ်ဆိုတာထက်
ဘယ်လို တွေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုသာ သင်ပေးပါ
ကိုဖိုးသန်တစ်ယောက် မျက်စေ့ဆေးခန်း ရောက်နေတယ်။
ဆရာဝန်က စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး မျက်မှန်တစ်လက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မှာလိုက်သေးတယ်... ...
"ဒီမျက်မှန်နဲ့ အဆင်ပြေမပြေ မနက်ဖန်ကျ လာပြောအုံး"
"ဟုတ်ကဲ့"... ဆိုပြီး ကိုဖိုးသန် ပြန်သွားတယ်။
နောက်ရက် ကိုဖိုးသန် ရောက်လာတော့ ဆရာက မေးတယ်... ...
Breast Cancer Treatment Regimes ရင်သားကင်ဆာ ကုထုံးများ
1. Ductal carcinoma in situ နို့ပြွန်လေးမှာသာ ကွက်ဖြစ်နေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ
(a) Conservative surgery + Radiotherapy တစိတ်တပိုင်းခွဲစိတ်နည်း + ဓါတ်ကင်နည်း၊
ပြန်ဖြစ်နှုန်းနည်းတယ်။ အသက်ရှည်နှုန်း မထူးခြား။
ဆီးရီးယားမြို့ နှစ်မြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု များကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၄ ဦး အထိ ရှိလာ
တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် မန်ဆာ သေဆုံးကြောင်း အိုဘားမား အတည်ပြု
❝ စောဘွဲ့မှူးအမှတ်တရ ❞ အမှတ် ➌ ✪ ကျွန်တော့် ဆရာ စောဘွဲ့မှူး✪
ယခုတလော ပြည်တွင်းမှ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများက တို့ ဆေး များသုံး၍ လုရက်မှု-မုဒိန်းမှုခလေး ငယ်များအား တို့ ဆေးသုံးလျှက် ဖမ်းဆီးခံရသည့် သတင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတ ရရန်နှင့် သတိထားနိုင်စေဘို့တို့ ဆေး အကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
တို့ ဆေးဟု လူပြောများနေသော်လည်း အမှန်မှာ အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အပ်အသေစားက လေးဖြင့် လူကိုယ်တွင်းသို့လျှက်တပျက် ထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ခြင်းကိုက်သလို စစ်ကနဲ့ စူးရှနာကျင်သွားမည်၊
လမ်းဆုံ လမ်းခွ ၊ မီးပွိုင့်များတွင် အတည့်သွားမည့်ကားသည် စုံ အချက်ပြမီး (ဘယ်/ညာ နှစ်ဖက်စလုံး အချက်ပြ) သုံးဖို့လိုလား-
အဖြေကတော့ No ပါ။
စုံ အချက်ပြမီးရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုတောင် မသိသူများမည်ဟုထင်ပါသည်။ ထိုတြိဂံ ပုံလေးရဲ့ နာမည်မှာ Hazard Warning Light / Hazard Light ဖြစ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:48 PM | No မှတ်ချက် |
‎ဇင်းနစ် ဇင်းနစ်‎ to ရသစုံ စာပေပျိုးခင်း
* မမြင်ရသေးသော သားသမီးလေးကို
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးနေခဲ့တာ *အဖေ*
လေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြီး အနာဂတ် plan
Author: lubo601 | 2:41 PM | No မှတ်ချက် |
တိတိကျကျ ပြောရရင် ၂၀၁၆.၅.၁၀ ရက်ညက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်တယ်....
ယမနိုတယ် ရထားပေါ် သူ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကျနေခဲ့လို့ တဲ့....ရဲစခန်းကို လိုက်ခဲ့ပါဦး ဆိုတော့ မအိပ်သေးပဲ လိုက်သွားတယ်...ဗျ။
သူ့အလုပ်က လကုန်ရက် time card သိမ်းပြီး ၁၀ ရက်နေ့ လစာ ရှင်းတော့ ၊ လစာတွေ ထုတ်လာတယ်.... ယန်း သောင်း(၂၀)ကျော်ပါတယ်(ယန်း ၂ သိန်းကျော်) မြန်မာငွေ ၂၃ သိန်းလောက်ပေါ့...
ဓာတ်ဆားမှုန့်(Oral Rehydration Salts) ဆိုတာ…ဝမ်း
ပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ
ရှိတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းခြင်းအတွက်ရေနဲ့
Videos for knowledge ဗဟုသုတ ဗွီဒီယိုများ
မြစ်ဆိပ်သို့ ရောက်သော် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဒေါသတကြီးနှင့် အော်နေကြသော မိသားစုတစ်စုကို တွေ့လေ၏။
ကျွန်တော် စတိုင်းဆိုင်တစ်ခုမှာ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ ။ အသက် ၅ နှစ်လောက်ပဲရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦးကို အရောင်းစာရေးမလေးက ပြောနေတာကို မြင်ခဲ့တယ် ။ အရောင်းစာရေးမလေးကပြောတယ် ။
အဲဒီတော့ ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကြည့်နေတာကိုမြင်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို မေးတယ် ။ “ ဦးဦး ကျွန်တော့်မှာ ငွေမလုံလောက်ဘူးဆိုတာ သေချာလားဟင် ”
Due to က because of နဲ့ ဆင်တူပါတယ် ၊ အကြောင်းပြချက်ပေးဖို့သုံးပါတယ် ၊ due to ကို စကားစု (phrase) များ .. တစ်လုံးတည်းသောစကား( single word) များနဲ့ အတူသုံးစွဲနိုင်သော်လည်း ပုဒ်စု (clause) များနဲ့ အတူ မသုံးနိုင်ပါဘူး